डब्लुएचओले मान्यता नदिएको रामदेवको कोरोनिल किट किन ल्याइयो नेपाल? « AayoMail
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बिहीबार भारतका योगगुरु रामदेव बाबाले बनाएको ‘कोरोनिल किट’ अनुदानमा दिइयो। झन्डै ५० कार्टुन कोरोनिल किट तथा औषधीले भरिएको थियो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
मन्त्री महतोले विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग आएकाले यसलाई हस्तान्तरण गरेको बताइन्। उनले कुन संस्थाबाट कोरोनिल अनुदानमा आएको भन्ने प्रश्नमा आफू जानकार नभएको बताइन्।
‘हामीले धेरै संघसंस्थालाई सहयोगको अपिल गरेका थियौं। तिनै संस्थामध्ये एकले सहयोग गरेको हो। बाँकी कति सामग्री छ, कति लागत केही थाहा छैन,’ मन्त्री महतोले भनिन्।
कोरोनिल किटलाई भारतको आयुष मन्त्रालयअन्तर्गतको सेन्ट्रल ड्रग्स स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनले औषधी उत्पादनको अनुमति दिएको छ।
मन्त्रालयले ‘सर्टिफिकेट अफ फार्मास्युटिकल प्रडक्ट’ दिएको छ। तर, यो औषधी भारतमै पनि विवादित छ भने चिकित्सकहरूले कुनै पनि बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छैनन्।
त्यसमाथि याे औषधी कुनै पनि देशमा वितरण तथा बेच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यसको वितरणलाई स्वीकृति दिएको छैन भने यसले कोरोनाबाट जोगाउँछ भनेर कहीँ कतै पनि प्रमाणित भएको छैन। कोरोना संक्रमण निको हुन्छ भन्दै बेच्न खोजिएको कोरोनिललाई भुटानले अनुमति नै प्रदान गरेन।
भुटानको ड्रग रेगुलेटरी अथोरिटीले एक वर्ष अगाडि नै भुटानमा बेच्न रोक लगाएको थियो भने डब्लुचएओ र भारतमै पनि अधिकारिकरूपमा दर्ता नभएको औषधी भुटानमा ल्याउन नपाइने भन्दै रोक लगाइएको थियो।
औषधी भित्रिनु अगाडि नै औषधी व्यवस्था विभागले अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ। तर, विभागलाई नै जानकारी नदिई स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले कोरोनिल लिएर आयुर्वेद तथा वैकिल्पिक चिकित्सा विभागलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
औषधी व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले हालसम्म विभागले कोरोनिललाई अनुमति नदिएको बताए।
‘यो औषधी दर्ताकै प्रक्रियामा छ। पतञ्जली कम्पनीले यो औषधी दर्ता गर्न आवश्यक कागजात र सर्टिफिकेट दिएको छ। यसको छानबिन भएपछि मात्र अनुमति दिने तयारी गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘विभागको अनुमति नभई औषधी वितरण गर्न पाइँदैन।
तर, मन्त्रालय आफैंले औषधी लिएका कारण यसमा हामी बोल्न मिल्दैन। अनुमतिबिना औषधी वितरण भएको पाइएमा हामी हेर्छौं।’ गत वर्ष नै कोरोनिल औषधी दर्ताका लागि विभागमा फाइल आइसकेको थियो।
‘पतञ्जलीका धेरै औषधी फ्रड भएका कारण कम्पनीको दर्ता नै नवीकरण गरिएको छैन। कोरोनिलले कोरोनाको उपचार गर्छ भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्य नभएका कारण गत वर्ष नै मैले यसलाई रिजेक्ट गरेको थिएँ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक नारायण ढकालले भने।
पतञ्जली कम्पनीका केही औषधीमात्र दर्ता गरिएको छ भने कयौं दर्ता हुनै बाँकी छन्।
औषधी भनेर लेखिएका सामान मन्त्री आफैंले लिएका कारण के आधारमा लिएको भन्ने बुझ्न नसकेको उनले बताए। औषधी लिए पनि वितरण भने गर्न नमिल्ने उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषत्र डा. रोशन पोखरेलले आयुर्वेद औषधीका विषयमा केही बोल्न नमिल्ने भन्दै सबै कोरोनिल किटको बाकस आयुर्वेद तथा वैकिल्पिक चिकित्सा विभागमा पठाइएको जानकारी दिए।
‘आयुर्वेद औषधीका रूपमा यस औषधीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले लिनुभएको हो। यस विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन। वितरण गर्ने जिम्मा सबै आयुर्वेद विभागलाई नै दिइएको छ,’ उनले भने।
आयुर्वेद विभागका सूचना अधिकारी डा. मुनकर्ण थापाले विभागसँग केही सल्लाह नै नगरी मन्त्रालयले औषधी लिएको बताए।
‘यसबारे हामीसँग कुनै सल्लाह पनि लिइएको थिएन। मन्त्रालयले लिएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेको पतञ्जली कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुझाएको र त्यहाँबाट विभागमा आएको हो।’
आयुर्वेद विभागले स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर, औषधीको कम्पोजिसन अध्ययन गरेर तथा औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको वा नभएको सबै हेरेरमात्र वितरणको तयारी गर्ने उनको भनाइ छ। यसबारे छलफल गर्न बैठक बसेर चिकित्सकको निगरानीमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। तर, तत्काल प्रयोगमा पठाउने कुनै तयारी नभएको थापाले जानकारी दिए। ‘प्याकेटमा तीन किसिमका सामान छन्।
कोरोनिल किट, तेल र स्वासारी राखिएका छन्। यिनीहरू आयुर्वेदमा प्रयोग भइरहेका औषधी नै हुन्। स्वासारी छाती, फोक्सो, दम, ब्रोङकाइटिससँग सम्बन्धित छन्,’ उनल भने।
तर यही औषधीलाई कोरोना नलाग्ने, कोरोना संक्रमणबाट बचाउने भनेर बाँड्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। यसलाई कोरोनासँग सम्बन्धित केही लक्षण देखिएमा प्रयोग गर्न सकिने भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै कोरोनिल किटमा गुर्जो, जेठिमधु, तुलसी नै भएका कारण यो नराम्रो भने नभएको उनले बताए।
‘देश–विदेशमा औषधी बेच्दा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यही प्रक्रिया पूरा गरेको छ–छैन, डब्लुएचओले अनुमति दिएको छ–छैन, बुझ्न जरुरी छ,’ थापाले भने, ‘हामी छलफल गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने कि र्फिता लिने भन्नेबारे सोच्छौं।’